शिवगढीमा जनकम्युनको अभ्यास - Janabato
शिवगढीमा जनकम्युनको अभ्यास
कम्युन कम्युनिस्ट समाजको भ्रुण वा वैज्ञानिक समाजवादको अभ्यास
२०७८ कार्तिक २७ गते शनिवार ०८:५१ मा प्रकाशित
२ हप्ता, ६ दिन, ४ घन्टा अगाडि
२५६ जनाले हेरिएको
बुटवल । शिवगढी प्रतिरोधको पर्याय हो । पञ्चायतदेखि नै राज्यसत्ताको फासीवादी दमन र हत्याकाण्डका शृङ्खलाहरू बेहोर्दै आएको शिवगढीले जनयुद्धकालमा मात्रै १३ जना सन्तानहरूलाई गुमाएको छ । सन्तान गुमाउनुको चोट कस्तो हुन्छ ? शिवगढीलाई थाहा छ । सहिद परिवारलाई थाहा छ । अर्थात् कपिलवस्तुले ११६ जना योद्धालाई गुमाएको छ र ९ जना अहिलेसम्म बेपत्ता रहेका छन् । राज्यले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि समेत पटक–पटक प्रहरीले दमन गर्दै आएको छ । शिवगढीका जनताले राज्यको दमनविरुद्ध निरन्तर प्रतिरोध गर्दै आएका छन् । त्यसकारण शिवगढी सङ्घर्ष र प्रतिरोधको पर्याय हो, लालगाउँ हो ।
अहिले यही गाउँमा नेकपाले जनकम्युनको अभ्यास सुरूवात गरेको छ । शिवगढीमा नेकपाको केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालय रहेको छ । जनकम्युनमा महासचिव विप्लवलगायत केन्द्रीय कार्यालय टिम र स्थानीय पार्टी एवं जनता नियमित उत्पादनमा जोडिएका छन् ।
कम्युनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
विश्व कम्युनिस्ट इतिहासमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा निर्माण भएको पहिलो कम्युन १८७१ को पेरिश कम्युन थियो । पेरिश कम्युन मजदुर वर्गको पहिलो आफ्नै राज्यसत्ता थियो । श्रमजीवी वर्गको महान आदर्श थियो । पेरिश कम्युनले युरोपका पुँजीपति वर्गको मुटुभित्र कम्पन मात्र पैदा गरेन, पेरिश सहरमा पड्केको क्रान्तिको बमले एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई समेत जागृत बनाएको थियो । पेरिश कम्युनको ४६ बर्षपछि रूसमा अक्टोबर क्रान्तिमार्फत् सोभियती जनताले जारतन्त्रको अन्त्य गरि आफ्नै समाजवादी कम्युन निर्माण गरेका थिए । चीनमा माओत्सेतुङले हुनानका ग्रामीण बस्तीहरुमा बसेर किसानहरुसँगै सामूहिक उत्पादनमा भागलिनु भएको थियो । उहाँले ‘सारा सत्ता किसानहरुको हातमा सम्पिनुपर्ने’ नारा दिएर हुनानका १ करोड किसानहरुको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । क्युबामा फिडेल क्यास्त्रोको नेतृत्वमा विदेशी एकाधिकारी र स्थानीय जमिनदारहरुको भुस्वामित्वको अन्त्य गरि जमिन किसानहरुलाई बाँडिएको थियो । भियतनामी जनताका प्रिय नेता होचिमिन्हले भारतीय मन्त्रीहरुको संवादमा ‘विहान बेलुका आफु खेतको काम गर्ने र दिउँसो राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेको’ बताएपछि भारतीय मन्त्रीमण्डल स्तब्ध मात्र भएन, लज्जित समेत भएको थियो ।
माओत्सेतुङले जीवनभर एउटै फाटेको लुगा लगाएर किन हिँडे ? होचिमिन्ह काँधमा कोदालो बोकेर किसानसित खेतमा काम गर्न किन जान्थे ? भेनेजुएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेज मञ्चमा उक्लिएपछि एउटा गायकले जसरी गीत किन गाउँथे ? के यो सस्तो लोकप्रियताको लागी थियो ? अहँ, त्यसो पटक्कै थिएन । यसको अन्तर्य भनेको आफुभित्र ती वर्गप्रतिको असीम प्रेम र निष्ठा थियो । त्यो वर्गलाई शोषणको जाँतोबाट मुक्त गर्ने अनवरत प्रण थियो र वर्गदृष्टिकोण कहिल्यै कमजोर नबनोस् भन्ने नै थियो ।
कम्युनको सुरुवात कसरी भयो ?
सिंगो संसार हल्लाउने पेरिश कम्युनजस्तै नभएपनि शिवगढीमा सुरुवात गरिएको जनकम्युन त्यसको सानो अंश हो र नमुनायोग्य कदम हो । अर्थात् एकीकृत जनक्रान्तिमा बलिदान गर्ने महान सहिद एवं क्रान्तिको निष्ठामा लामबद्ध नेता कार्यकर्ता तथा लाखौं श्रमजीवी जनताको आदर्शको प्रतीक हो । अर्थात् कम्युनिस्ट समाज निर्माणको एउटा भ्रुण हो । जनयुद्धकालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले जुनी जनकम्युन, जलजला जनकम्युन, अजम्बरी जनकम्युन र बलिदान जनकम्युन गरी ४ वटा कम्युन सञ्चालन गरेको थियो । विप्लवको नेतृत्वमा नेकपा पुनर्गठनपछि पार्टीले सामूहिक उत्पादनलाई जोड दिदै आएको थियो । नेकपामाथि राज्यले प्रतिबन्ध लगाएपछि भूमिगत रूपमा नेकपाले कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, नवलपुर, रोल्पा, दाङ, कालिकोटलगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा सामूहिक उत्पादन कार्य गर्दै आएको थियो । सरकारसँग ३ बुँदे सहमतिलगत्तै प्रतिबन्ध खुलेपछि नेकपाले कम्युनिस्ट समाज निर्माणको भ्रुण भएको भन्दै कम्युनमार्फत् वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको अभ्यास गर्न खोजिरहेको छ ।
कम्युनबारे कसले के भन्छन् ?
कम्युनबारे नेकपाका महासचिव विप्लव भन्नुहुन्छ, “पार्टीले सामूहिक उत्पादनलाई जोडदिने काम थबाङ महाधिवेशनले गरेको थियो, त्यसलाई नवौं केन्द्रीय समितिको बैठकले ठोस गरेको छ । अहिले देशभर २० बिघा जमिनमा उत्पादन भइरहेको छ र केन्द्रीय कार्यालयले शिवगढीमा ७ बिघामा उत्पादन गरिरहेका छौं ।” कम्युनबारे विप्लव भन्नुहुन्छ, “कम्युनले उत्पादनमार्फत् पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई आत्मनिर्भर बनाउनेछ । उत्पादनका लागी जनतालाई पनि सिकाउने र जनतासित सिक्ने तथा समाजलाई आत्मनिर्भर बनाउदै देशलाई नै बदल्ने कम्युनको उद्देश्य हो । देश, समाज र पार्टीलाई आत्मनिर्भर र स्वाधीन बनाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो ।”
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय कार्यालय सचिव असल क्षेत्रीले कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता आफ्नो श्रम र स्वाभिमानमा बाँच्नुपर्ने बताउनु भयो । नेता असलले कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिभित्र रहेर जनकम्युनको सुरुवात गरेको बताउँदै यसले नेता कार्यकर्तालाई आत्मनिर्भर मात्र होइन, अनुशासित हुन समेत सिकाउने बताउनु भयो । नेता असलले महासचिव विप्लवको नेतृत्वमा दैनिक श्रममा जोडिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी महासचिव विप्लवको नेतृत्वमा दैनिक २ घण्टा अनिवार्य सामूहिक उत्पादनमा जोडिएका छौं ।”
जनकम्युनमा के–के उत्पादन भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नमा नेता असल भन्नुहुन्छ, “हामीले जनकम्युनमा १ सयजति बाख्रापालन, ३ प्रजातिको माछापालन, धानखेती, तरकारी, सागसब्जी, बङ्गुरपालन, मकैखेती, आलु, बेमौसमी तरकारी, कागती, आँप, सुन्तला, कटहर, लिची, बेलौटी, अदुवा, बेसार, खुर्सानी आदि कम्युनमा रहेको छ ।” उहाँले उत्पादनलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिसित जोड्ने प्रयास गरेको समेत बताउनु भयो ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं कपिलवस्तु–अर्घाखाँची इन्चार्ज जुझारूले कपिलवस्तुमा जिल्लाको नेतृत्वमा ४ बिघा खेतमा धान उत्पादन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले जिल्लामा आइपर्ने खाद्यान्नको अभाव उत्पादनले गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्रतिबन्धको अवधिदेखि नै जिल्लामा उत्पादन कार्य गर्दै आएका थियौं । त्यसलाई निरन्तरता दिदै अहिले ४ बिघामा धानखेती गरेका छौं ।” नेता जुझारुले पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई अनिवार्य उत्पादनमा जोड्ने र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पार्टीले कम्युनको अभ्यास गरेको बताउनु भयो ।
जनकम्युनमा दैनिक ४ देखि ५ घण्टासम्म केन्द्रीय कार्यालय टिम श्रममा खटिरहेको कार्यालय सदस्य विमर्श बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी प्रत्येक दिन विहान र साँझ कार्यालयको टिम श्रममा जोडिएका छौं । यसमा महासचिव विप्लव दैनिक २ घण्टा श्रममा जोडिनु भएको छ ।”
कम्युनले उत्पादन गरेका खाद्यान्न, तरकारी, बाख्रा, माछालगायत बस्तु तथा खाद्य पदार्थले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको दैनिकी खर्च, नेता तथा कार्यकर्ताको आधारभुत खर्च सञ्चालन सजिलै गर्न सक्छ । उत्पादनलाई बृद्धि गर्दै जाने हो भने कम्युनमा उत्पादित वस्तुहरु विक्री गर्न समेत सकिने सम्भावना छ । उत्पादनका लागी उपयुक्त स्थान र पर्याप्त सिंचाई हुने हो भने यातायात र बजारको समस्या पर्ने देखिदैन । नजिकै राष्ट्रिय राजमार्ग र बुटवल, भैरहवा, चितवन, दाङ, नेपालगञ्जसम्म कम्युनमा उत्पादित बस्तुहरुको बजार हुन सक्ने सम्भाव्यता देखिन्छ । कम्युनमा उत्पादित बस्तुहरु अर्गानिक भएकोले उपभोक्ताहरुले बजारमा स्वच्छ र स्वस्थ तरकारी, फलफूल, माछामासुहरु खोजी गर्नेछन् । अर्कोतिर कम्युनमा उत्पादित वस्तुहरु सिधै उपभोक्ताले पाउने हुनाले सस्तो मूल्यमा समेत प्राप्त गर्नेछन् । कम्युनलाई देशभर व्यवस्थित सञ्चालन र विस्तार गर्न सक्ने हो भने नेकपाका नेता कार्यकर्ता आत्मनिर्भर त हुने नै छन्, यसले सिङ्गो देशलाई आर्थिक आत्मनिर्भरतातिर समेत लैजाने छ । देशलाई स्वाधीन र समृद्ध बनाउनेछ र सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरुको सपना पुरा हुनेछ ।
नेकपा अर्घाखाँचीद्धारा ठाडामा मूल्यवृद्धि विरुद्ध मसाल जुलुस
मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज नगरे विशाल जनसंघर्षमा जुट्न बाध्य हुन्छौं...
जनयुद्वका सुखद् र दुखान्त दृश्यहरू
अक्टोबर क्रान्तिको झण्डा अजेय छ ।